कोरोना खोपले के महिनावारीमा असर पार्छ ?
गृहपृष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कोरोना खोपले के महिनावारीमा असर पार्छ ?
काठमाडौँ । विश्वका धेरै देशले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिइरहेको छ । सामान्यतया कोभिड खोप लिएपछि मानिसहरुमा टाउको दुख्नु, ज्वरो आउनु, एक–दुई दिन सुई लगाएको ठाउँ पाखुरामा दुख्नु आदि असरहरु देखिनु सामान्य हो । तर, खोपकै कारण महिलाको महिनावारी चक्रमा परिरहेको छ भन्ने विषयले महिला तथा किशोरीमा चिन्ता र चासो बढेको छ ।
धेरैजसो महिलामा महिनावारी चक्र २१ देखि ३५ दिनको हुन्छ । १४ देखि २५ प्रतिशत महिलामा अनियमित मासिक चक्र देखिएको पाइएको छ । त्यो चक्र छोटो वा लामो हुनसक्छ र एकदम बढी र हल्का रगत बग्ने पनि हुनसक्छ । येल स्कुल अफ मेडिसिनका अब्स्टेट्रिक्स, गाइनोकोलोजी तथा रिप्रोडक्टिभ साइसेन्सका प्रमुख डा। ह्युग टेलर भन्छन्– ‘यो बेवास्ता गरिएको एक महत्वपूर्ण विषय हो । मेरो आफ्नै बिरामीहरुबाट खोप लगाएपछि महिनावारिमा फरक देखिएको छ ।’
यूके रोयल्यस् कलेज अफ अब्स्टेट्रिसियन्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्टका उपाध्यक्ष डा। जो माउन्टफिल्डका अनुसार महिलाहरुलाई यसबारे चासो हुनु स्वाभाविक हो । उनका अनुसार अहिलेसम्म अस्थायी पविर्तनले मानिसको भविष्यको प्रजनन क्षमताको असर पार्ने वा सन्तान नहुने भन्ने बारे तथ्य फेला परेका छैनन् ।
नेपाल सोसाइटी अफ अब्स्टेट्रिसिन्यस् एन्ड गाइनोकोलोजिस्टका अध्यक्ष डा। गणेश दंगालले हालसम्म यस्तो समस्या लिएर बिरामीहरु आएको जानकारीमा नआएको बताए । ‘कोभिड खोप सुरक्षित रहेको र यसले महिनावारीमा कुनै फरक पार्दैन,’ उनले भने, ‘अरु कारणले गडबडी हुनसक्छन् । त्यसैले कोभिड खोपले होला भन्ने छ । अध्ययनहरुमा महिनावारी गडबड गरेको अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छैनन् । त्यसैले डराउनुपर्दैन ।’
नर्भिक अस्पतालकी स्त्री रोग विशेषज्ञ डा। रंगीना लाईकंगबमका अनुसार पनि हालसम्म ओपीडीमा यस्तो समस्या लिएर कोही आएका छैनन् । डा। रंगीना भन्छिन्– ‘महिनावारी गडबडी विभिन्न कारणले हुनसक्छन् । खोप लगाएका बेला संयोगवश पछि केही असर होला । रिसर्च पेपरहरुहरु पुष्टि भएर आइसकेका छैनन् त्यसैले यसमा यसै कारण भन्न सकिन्न ।’
इम्पेरियल कलेज लन्डनकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा। भिक्टोरिया मेल भन्छिन्– ‘खोप तथा भाइरल संक्रमणले रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई प्रभाव पार्ने भएकाले यसले अस्थायी रुपमा महिनावारी चक्रमा असर पार्ने हुन्छ । त्यसलै पनि यसको अध्ययन महत्वपूर्ण रहेको छ ।’ उनका अनुसार यदि कुनै परिवर्तन देखा परी हाले पनि ती अस्थायी हुन्छन् र तिनले हानी पुर्‍याउँदैनन् ।
यूएस नेशनल इस्टिच्युट अफ हेल्थको समन्वयमा ५ वटा संस्थाले महिनावारी र खोपको सम्बन्धकाबारे अध्ययन गर्ने भएका छन् । कोभिड–१९ को खोपपश्चात् महिनावारीमा पार्ने सम्भावित प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिनेछ । यो अध्ययन बोस्टन युनिभर्सिटी, हार्वड मेडिकल स्कुल, जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटी, मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटी र ओरेगन हेल्थ एन्ड साइन्स युनिभर्सिटीले संयुक्त रुपमा अध्ययन गर्ने भएका हन् । (कान्तिपुरबाट साभार)